Ubuntu Budgie 20.10 ifika inezinto ezininzi ezintsha kwidesktop yakho | Ubunlog
Ubuntu Budgie 20.10 ifika inezinto ezininzi ezintsha kwidesktop yakho, ii-applet, imixholo kunye nokwamkela isikrini
Nangona usapho lweCanonical lunezinto ezisi-8, ndiyakholelwa ukuba zimbalwa okanye akukho nanye kuzo eya kuthi izise izinto ezininzi namhlanje njengomntakwabo omncinci. Imalunga ne Ubuntu Budgie 20.10, kwaye ndicinga ukuba ekuphela kwento eza kusondela kancinci kuyo ngokweenguqulelo iya kuba yi-Ubuntu Studio, kuba inguqulelo yabahleli yenkqubo yeCanonical iya kwenza i-Plasma kwi-XFCE ebikade iyisebenzisa ixesha elide.
Kodwa masifike kwinqanaba leli nqaku, elikhutshwa Ubuntu Budgie 20.10 Groovy Gorilla kunye ezona ndaba zibalaseleyo. Inqaku lokukhupha, elifumanekayo kwiintsuku ezimbalwa, linomtsalane ngenxa yokuba likhulu kangakanani. Ke ngoko, asinakongeza kubo bonke kwisithuba esifana nesi, kodwa sinokongeza isishwankathelo esinokufundwa emva kokusikwa.
1 Yintoni entsha ku-Ubuntu Budgie 20.10
2 Ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa
Yintoni entsha ku-Ubuntu Budgie 20.10
Izicelo zeGNOME 3.38.
I-GRUB 2 evela kwi-ISO isebenza kwiLifa kunye ne-UEFI.
Ubuntu Budgie 20.10 iinqanawa ezinenguqulo ye-git ye-budgie-desktop v10.5.1 ebandakanya yonke into ukuya kuthi ga kumhla we-20.10 womkhenkce.
Ipatch eyenzelwe ukuvumela ukukhetha ukuba yeyiphi na usetyenziso lwe-skrini eya kuthi icelwe xa ucinezela uPrinta, Ctrl Printa, Alt Printa- umhleli we-dconf usetyenziselwa ukutshintsha usetyenziso.
Ukutshintsha iphepha lodonga ngoku kuyayihlonipha iflegi yoopopayi, ke ukuba sijikeleza oopopayi, ukutshintsha iphepha lodonga kwenzeka kwangoko.
Ukuchaphazeleka maxa wambi xa ususa iiapplet kwiphaneli.
Ukunyuka kusombulule ii-systray icon ezophula ukungena ngemvume, ukuqala ukumisa, ukusombulula isiciko seSpotify esingabonisi kugwababa, izazisi ezisekwe kwisikhangeli seChannel ngoku zibonisa ii icon zazo, zivunyelwe ukwenza iimeko ezintsha zeewindows ngonqakrazo oluphakathi lwe-applet yoluhlu lomsebenzi uyilahle kwakhona le systray. Oku kusombulula iingxaki ezininzi, kubandakanya ii icon ezibonakala ngathi ziyadibana.
Kwigwababa amanani eveki emiselweyo aboniswa kwikhalenda.
Yongezwe indawo yokufihla umxholo "ongagqibekanga" kwi-budgie-desktop-useto eligama elikhethekileyo le-Debian lika "Adwaita".
Ukuphuculwa kweeapplet kunye neeapp-mini.
Wamkele ukuphuculwa kwescreen.
Zonke iipakeji ziyafumaneka ngengalo64, ke inokusetyenziswa kwiRaspberry Pi.
Gcwalisa uluhlu lweendaba ezivela esi sixhobo ngesiNgesi okanye kwi le enye iguqulelwe.
Ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa
El ukumiliselwa kuphantse kwasemthethweni, Oko kuthetha ukuba inokukhutshelwa kwi- Umncedisi we-Canonical kwaye kungekudala siza kuba nakho ukuyenza kwiwebhusayithi yeprojekthi, esinokufikelela kuyo esi sixhobo. Abasebenzisi abakhoyo banokuhlaziya kuhlobo olutsha lwenkqubo efanayo. Ukwenza ufakelo lwe-zero, kungcono ukuba ulandele isifundo sethu ngendlela yokufaka inkqubo yokusebenza kwilinge, njengoko kuchaziwe Oku kubhaliwe okanye ngaphakathi le enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezinye iidesika » Ubuntu Budgie 20.10 ifika inezinto ezininzi ezintsha kwidesktop yakho, ii-applet, imixholo kunye nokwamkela isikrini
Ubuntu MATE 20.10 ufika nezalathi zeAyatana, isikhombisi esisebenzayo kunye nezinye iindaba
I-VirtualBox 6.1.16 ifika nokulungiswa kunye nenkxaso yeLinux 5.9